RAFASHADA SIYAASADEED | Sahal News
You are here : Sahal News » Opinion » RAFASHADA SIYAASADEED
Posted by shlf2 on October 28th, 2014 11:34 AM | Opinion
Muqdisho(SHL-News)- Cabdishakuur Mire waa qoraa wax badan ka qoray arrimaha Soomaaliya, mudo dheer ayuu ka shaqeynayay siyaasada gudaha ee Soomaaliya, wuxuuna si wanaagsan ugaranayaa dhanka iyo hadba meesha ay udhutinayso Siyaasada cakiran ee Soomaaliya.
Waa qoraaga kaliya ee si mug leh uqoray taariikhda Islaamiyiinta Soomaaliya, buugaas oo noqday buugii ugu horeeyey oo si faahfahsan uga hadlaya arrimahaas.
Cabdishakuur Mire wuxuu mudo ka tirsanaa golayaasha dawladda Puntland, gaar ahaana dawladdii Madaxweyne Faroole ayuu ka soo noqday Wasiiru dowle , hadaba aragtidiisa ayuu ku cabiray dagaalka Siyaasadeed ee Villa Soomaaliya ka socda, waxaana uu qoray maqaal ciwaan uu uga dhigay RAFASHADA SIYAASADEED.
Aragtidaas waa mid ku kooban Siyaasi Cabdishakuur Mire Aadan, wuxuuna ku bilaabay qormadiisa sidan.
Ra’isul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed kolkuu ka soo rakaabsanayey diyaaradii uu u soo raacay Muqdisho ee hamiga ah inuu soo doonto jagada uu caawa ku fadhiyo muxuu niyada iska lahaa? Siyaasada qof waliba si ayuu ku soo galaa ma ahan wax si sahlan lagu helo awooda hogaamintu. Qof surun iyo wado dheer ayuu u soo maraa, waa loo soo rafaadaa…. Maal iyo maskax badan ayaa loo huraa.. Ogow e ciyaar ciyaar laguma helo.. Ragga qaarkiis dhiig ayeyba u daadshaan. Laakiin la kala nasiib badan…. Cabdiweli Sheekh Axmed si fudud ayuu ku helay isagoo ahaa shaqsi aan hore looga baran masraxa siyaasada.. Wax qarash ama dhaqaale ah oo ka badan tigidhkii diyaarada uu ku yimid Jeda/ Sacuudiga ugama bixin siduu kursigaas ku heli lahaa……
Kooxda Dam-Jadiid ha ku sooo xushaan Cabdiweli Sheekh Axmed inay ku fogeeyaan dad kale oo ay colaad siyaasadeed u hayeen amaba si kale wax ha isu tusiyaane qalinkoodii ayaa wuxuu qoray Cabdiweli Sheekh Axmed. Markaas ayey ku baraarugeen Qalwadii mas ayaa galay….Durba waa la is qaniinay. Waxa ugu badan oo la isku hayey ayaa ahayd qaabka loo gaarayo higsadka 2016.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo ragiisii waxay noqdeen gacan ku gabad. Wasiirkii Amniga waa is casilay kolkii wadna qabad uu ku noqday amnigii waxba lagama qaban…. Waxaa laga Tashan Madaxweynaha oo dhanka Cabdiweli Sheekh Axmed ka timid magcaabidii wasiirada banaanaa magcaabidooda.. Weli waa dhaban hays kooxdii Dam-Jadiid waxaana dhan walba ka hafiyey duufaanta rafashada siyaasada ee qoomamadoodii noqtay Saacidkaygii maxaa nagu diray oo aan booska uga qaadnay. Beesha Caalamka ayaa wadna goysay Xasan Sheekh Madaxweynaha Soomaaliya, waxaana dhinac walba ka daqray khaladaadka siyaasadeed ee uu ku raftay.
Waxaa xilkii laga qaaday Taliyaashii nabadsugida iyo Booliska , maalmo ka dib waxaa la eryey Taliyihii Nabadsugid ee cusbaa…. Dharbaaxa siyaasadeed oo daaduumisay Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Dam-Jadiid oo xiligii doorashada ka soo adkaaday rag badan oo siyaasada kula tartamayey ayaa indhaha kaga keentay hoor ilmo ka soo qubatay, kuwaas oo maal iyo maskaxba geliyey siday u helilahaayeen madaxnimaa dalka…… Dabaalato biyaha hoosteeda ayey iska aragtaa waa la isku maqnaa .. waase la wada socday
SIYAASADA QOBKA MOOSKA.
« DHAGAYSO: Wararkii ugu dambeeyey shirka Baydhabo.
DHAGAYSO: Kulan loga hadlayo Nidamka Asxabta badan oo ka furmay Garowe………. »